महिलाहरु मा बांझपन को उपचार गर्न को लागि क्लाइमड को अंतिम गाइड
Clomid को बारे मा सबै केहि
1। Clomid के हो? यस्ले कसरी काम गर्छ? 2। Clomid Uses
3। क्लोमेड खुराक 4। Clomid परिणामहरू
5.Clomid आधा-जीवन 6। Clomid Side Effects
7। Clomid फायदाहरू 8। Clomid समीक्षाहरू
9। Clomid बिक्री को लागि 10। महिलाहरु मा बांझपन को उपचार गर्न क्लूम - (सारांश)
Clomid के हो? यस्ले कसरी काम गर्छ?
क्लमोफिन सिटरेट पनि भनिन्छ Clomid (50-41-9), एक मौखिक औषधि हो जुन विशेष महिला बांझपन प्रकारहरूको उपचारको लागि प्रयोग गरिन्छ। ग्लोबल रूप मा यो विभिन्न क्लाइम नामहरु जस्तै क्लमोडैक, क्लोमेन, बिमोट, क्लोमी, क्लोमेफेन, बेलोम, बोलेफेन, बायोगेन, ब्लेलीफेन, क्लोमोमेफीन, क्लोम हेकल, एट अल। यसको प्रयोग अनुमोदन गरियो र संयुक्त राज्य अमेरिका मा 1967 मा मेडिकल उपयोग को लागी सिफारिस गरिएको थियो। हरेक स्वास्थ्य प्रणालीले विश्व स्वास्थ्य संगठनमा आवश्यक औषधिहरूको सूची अनुसार यो सबैभन्दा सुरक्षित र प्रभावकारी औषधिको आवश्यक पर्दछ। यो सामान्य औषधिको रूपमा फेला पर्यो। क्लोमेड महिलाहरु मा धेरै ovulation प्रेरण विकल्पहरू बीच हो जुन oligo-ovulation र anovulation को कारण बांझ हो.
औषधिले यो तरिकामा काम गर्दछ जसको शरीर शरीरमा सोच्दछ कि एस्ट्रोजनको स्तर कम छन् र यसैले पिट्यूटरी ग्रंथिले लुटिनाइज हार्मोन एलएच वा कूपिक उत्तेजक हार्मोनलाई अन्यथा FSH स्रावण भनिन्छ भनिन्छ। उचाइ FSH ले स्तरहरूलाई एक वा बढी अन्डाको फोक्सहरू उत्पन्न गर्ने ओभरहरूलाई उत्तेजित गर्दछ जुन त्यो विकसित हुन्छ वा ओभलेशनमा उत्पादन गरिनेछ। अर्कोतर्फ, उच्च एलएच स्तरों ओवन को उत्तेजित गर्दछ।
क्लोमेड (50-41-9) को पुराना चिकित्सकहरु मध्ये एक पचास वर्ष को लागि एक पुरानो विकल्प को रहेको छ या ओबी - GYN को सामान्यतया clomiphene सिटरेट को वर्णन गर्नु पहिले एक या दो अतिरिक्त विशेष हेरविचार को लागि एक प्रजनन विशेषज्ञ को जाँच को लागि पहिले संदर्भित। केहि प्राणी विशेषज्ञहरूले क्लमोफिन सिटरेट पनि गर्दछन्। यो औषधि महिलाहरु को लागि सल्लाह छैन जसको अंडाले राम्रो तरिकाले अण्डाहरू बनाउँदैन (प्राथमिक पिट्यूटरी वा सेक्स ग्रंथि विफलता)।
अनौपचारिक शारीरिक अवस्था, अल्पसंख्यक रक्तचाप, अनावश्यकता, माध्यमिक सुधार, पछि गर्भनिरोधक योजोरा, ग्यालेक्टोर्रोआ, पलिकोस्टिक अण्डाहरु को सिंड्रोम, चीरी-सेल्लिडा हार्मोन, स्टेरॉयड हार्मोन अपर्याप्तता, oligospermatism, endocrine ग्रंथि को गनडोट्रोफिक कार्य को परेशान को निदान। क्लमोफिन साइट्रेट प्रायः उपयोगी छ किनभने गर्भवती संयुक्त राष्ट्र एजेन्सीलाई आग्रह गर्न प्रयास गर्ने निम्न समस्याहरू छन्:
अनियमित ओल्लेशन: यो महिलाको चक्र क्षेत्र इकाई पछि एकैचोटि गर्भपतन गर्न कठिनाई हो जुन त्यो निश्चित हुन सक्दा एकपटक निश्चित हुन सक्दैन। प्रभावकारी एकपटक, क्लमफिन सिटरेटको प्रयोगले नियमित संभोग वा इन्टर्राब्रिनाइन को उत्तेजना को लागि अनुमति को लागि एक निश्चित ओवर्युलेट प्रतिक्रिया तैयार गर्न को लागी चाहिए।
"पुरुष कारक" प्रजनन समस्याहरू: एक पटक त्यहाँ तरल पदार्थको गुणस्तरको साथमा चिन्ता हुन्छ, सामान्यतया तपाईंको चिकित्सकले शारीरिक अवस्थाको संभावनालाई अधिकतम गर्न इन्टर्राब्रिनाइन अप्ठ्यारो को सुझाव दिन्छ। क्लमोफिन सिट्रेट प्रायः महिलाको चक्रसँग अन्तर्वार्ताको अस्थायी व्यवस्थाको सुविधाको आदी हो।
अपरिचित बेरोजगारी: क्लमोफिन सिटरेटले स्वस्थ युवा युगलहरूमा शारीरिक अवस्थाको वृद्धि बढाएर प्रभावकारी हुने देखाइएको छ जसले पूर्ण पारंपरिक प्रजनन विश्लेषण गरेको छ, तथापि अझै पनि क्षेत्र इकाई गर्भवती प्राप्त गर्दछन्।
प्रत्येक नयाँ उपचार चक्र अघि कुनै पनि महत्त्वपूर्ण अवशिष्ट यौन ग्रंथि वृद्धि बढाउन एटी अल्ट्रासाउन्ड परीक्षा प्रदर्शन गर्न सल्लाह छैन।
क्लोमेफिनले विभिन्न मोटर-सहायता प्रविधी प्रविधिको साथ संयोजक रूपमा प्रयोग गरीएको छ जुन उनीहरुको विभिन्न मोडलहरु को सफलता दर को विस्तार गर्न को लागी छ।
क्लोमेफिन सामान्यतया ई्युन्यूक्वेस्टिज्म को उपचार मा प्रयोग गरिन्छ जस्तै अरुरोजनिक हार्मोन प्रतिस्थापन चिकित्सा हेरविचार को।
डोजेज फारम: गोली एनडीसी 0068-0226-30: तीसौं कार्टुनमा 50 मिलीग्राम ट्याबलेट
ट्याब्लेटहरू एकाइमा गोलाकार, सेतो, बनाइएका हुन्छन्, र क्लोमेफीन सिट्रेट पचासमा डिब्बा छन्।
नियन्त्रण गरिएको तापमान 59-86 ° F (15-30 ° C) मा ट्याबलेट। गर्मी, उज्यालो, र अत्यधिक गहिराईबाट ढाल, र बन्द कन्टेनरहरूमा भण्डार गर्नुहोस्।
क्लोमेफीन सिटरेट मेडिकल हेरविचारका लागि उम्मेद्वारहरूको कार्यपूर्ति र उपचारका लागी चिकित्सकहरु द्वारा चिकित्सकीय विशेषता वा ईन्कोड्रेन्स विकारको व्यवस्थापनमा पुरानो निरीक्षण गरिनेछ। रोगीलाई क्लमोफिन सिटरेटले केवल सावधानीपूर्वक निदान विश्लेषण गर्दा चिकित्सा हेरविचारको लागि रोजिएको हुनुपर्छ। चिकित्सकीय हेरचाह को व्यवस्था पहिले देखि मुद्रित हुनु पर्छ। चिकित्सकीय हेरविचारको लक्ष्य प्राप्त गर्न असम्भवहरू क्लमोफिन सिटरेट सुरु गर्नु अघि बहिष्कृत वा पर्याप्त व्यवहार गर्नुपर्छ। चिकित्सकीय उद्देश्यलाई सम्भावित जोखिमसँग सन्तुलित हुनुपर्छ र रोगी एट अलको साथ उल्लेख गरिएको हुनुपर्छ। शारीरिक अवस्थाको क्रियाकलाप भित्र सम्बन्धित।
चुनेको रोगी को उपचार, शुरुवात, एक कफी खुट्टा, पाँच दिन को लागि पचास मिलीग्राम दैनिक (1 ट्याब्लेट) को लागी। खुसी को लागी केवल उन्हीं रोगहरुमा अतिमूल्य हुनु पर्छ संयुक्त राष्ट्र एजेन्सी चक्रवाट पचास मिलीग्राम क्लोमेफीन सिटरेट को प्रतिक्रिया मा उत्सुक छैन। एक कफी अनिश्चितता मात्रा वा उपचार कोर्स को लम्बाइ विशेष गरी सल्लाह दिइन्छ यदि पिट्यूटरी हार्मोन को अति अति संवेदनशीलता संदिग्ध हुन्छ, जस्तै पलिकोस्टिक ओवारीरी सिंड्रोम मा रोगीहरु लाई।
रोगी को शारीरिक उपचार, यौन ग्रंथि बढावा, या हरेक उपचार चक्र को बीच पिस्ट गठन को बाहिर निकालन को लागि फास्टइडियड को मूल्यांकन गर्न को लागी चाहिए।
यदि प्रोजेजेन-इनडाइड ब्लडिंग योजना बनाई छ, वा यदि प्रायः महिला आन्तरिक प्रजनन अंग हेमोर्रेसन मेडिकल हेरविचार गर्नुअघि, पाँच दिनको लागि पचास मिलीग्रामको कार्यक्रममा सुरु वा चक्रको पाँचौं दिनको सम्बन्धमा सुरु गर्नुपर्छ। मेडिकल हेरविचार पनि कुनै पनि समयमा रोगी भित्र संयुक्त राष्ट्र एजेन्सीसँग हालैको महिला आन्तरिक प्रजनन अंग बिरुवा छ। जैविक प्रक्रिया यो खुराकमा हुन्छ एकपटक, उपचारको सफल चक्रमा खुराक बढाउन कुनै फायदा छैन।
यदि एक चिकित्सीय प्रक्रिया को प्राथमिक चरण पछि एक जैविक प्रक्रिया पछि लाग्न सक्दैन, एक सय दिन को दोश्रो पाठ्यक्रम (दुई पचास मिलीग्राम ट्याब्लेट एक दैनिक खुराक को रूप मा दिइएको छ) को लागि पांच दिन को लागन को लागी चाहिए। यो कोर्स पनि प्रारम्भिक रूपमा 30 दिनको रूपमा सुरू गर्न सक्छ जब अघिल्लो एक पटक मातृभाषाको उपस्थिति बाहिर निकाल्न क्षेत्र इकाईलाई सावधान गराउँछ। खुट्टा खुल्ला या चिकित्सा को हेरविचार अवधि को लामो दिन एक सय मिलीग्राम / दिन को पांच दिन को लागि सल्लाह छैन।
अधिकतर रोगीहरूले संयुक्त राष्ट्र एजेन्सी क्षेत्रमा एकाइको नियन्त्रित क्षेत्र एकाइले एक पटक हेरचाह गर्दछन्। यदि जैविक प्रक्रियाले एक पटक हेरचाह गरेपछि एक पटक हेरचाह गर्नुपर्दछ, क्लमफेन सिटरेटको साथ थप उपचार परामर्श गरिएको छैन र रोगीलाई पुन: मूल्याङ्कन गर्नु पर्दछ। यदि तीन ओभर्युलेटिक प्रतिक्रियाहरू हुन्छन् भने, तथापि मातृत्व को प्राप्त भएको छैन, अतिरिक्त उपचार को सल्लाह छैन।
क्लमोफिन सिटरेटले धेरै अण्डाहरूको निर्वहनको कारणले गर्दा, गुणहरू प्राप्त गर्ने सम्भावनाहरू (जुत्ताहरू वा ट्रिपलहरू ... कहिलेकाँही थप) माथि जान्छ। सम्बद्ध ज्ञान प्रवर्धन विशेषज्ञको साथ अपरेटिङ संयुक्त राष्ट्र एजेन्सीले सही खुराकलाई उच्च प्रदर्शन आदेशको मौका कम गर्दछ।
आईवीएफ इष्टतम आमा / बच्चाको परिणामको लागि प्रति मातृभाषाको संख्या सीमित गर्न अर्को प्रविधी हो।
जब यो कार्बनिक प्रक्रिया को उत्तेजित गर्दछ शामिल हो, क्लूमफीन साइट्रेट अविश्वसनीय रूप देखि विजेता छ, संयुक्त राष्ट्र एजेन्सी को लगभग 8 बजेट मा परिपक्व अण्डा को निर्दोष को उपयोग को कारण यो प्रयोग गर्दछ।
Boldenone Undecylenate (Equipoise) उपयोग, चक्र, डोजज, काटन, ब्लिङ(नयाँ ब्राउजर ट्याबमा खोल्छ)
यदि तपाइँले हालै क्लमफेन सिटरेट रोकेको छ भने, त्यहाँ एउटा अवसर हो जुन तपाइँले भर्खरका खुट्टामा दिनहरू (वा सम्भावित हप्ताहरू) को लागी मात्र सुस्त प्रभाव प्रभावकारी हुन सक्छ। यी लिङ्गिङ पहल प्रभावले तपाईंलाई संकष्ट गर्न सक्छ कि क्लोमेफीन सिटरेट र यसको मेटाबोलाइटहरू अझै पनि तपाइँको प्रणालीमा हुनुपर्दछ र यो सफा गर्नु अघि धेरै समयसम्म अचम्म पर्छ। तथापि हेर्नको लागी लामो क्लोमेफिने सेन्टरेट शायद तपाईंको अर्डरमा रहन होईन, यो5देखि7दिनमा यसको उन्मूलन आधा जीवनको बारेमा सोच्न आवश्यक छ।
यो पाँच देखि सात दिनको उन्मूलन क्लोमेड आधा-जीवन यो तपाईंको अन्तिम खुराक परिसंचरण देखि एक क्लोमेफर सिट्रेट खुसी को पाँच-सौथ को समाप्त गर्न पूर्ण हप्ता सम्म लगभग लाग्न को लागी जाँदैछ। यो क्लमोफिन सिट्रेट यस्तो लामो लामो उन्मूलन आधा-अर्काको जीवन, तपाईं आफ्नो असाधारणतामा सही हुनेछ कि यो तपाईंको प्रणालीमा अझै पनि हुन्छ - यसको अन्तिम खुट्टा पछि हप्ताको हप्ता हो। औसतमा, तपाईको प्रणालीबाट क्लमफिनि सिटरेट हटाउन बीस सात .5 र 38.5 दिनहरू बीचमा लैजान्छ; लगभग चार देखि छ हप्ता
अन्य रिपोर्ट दस्तावेज कि क्लोमोइड को आधा-जीवन लगभग दुई हप्ता (14 दिन) हो, जसको अर्थ छ कि क्लोमेफिनि सेन्टरेट तपाईंको सिस्टम मा तपाईंको आखिरी खुट्टा एक पल्ट सम्म ग्यारह हप्ता सम्म रहन सक्छ। धेरै प्रयोगकर्ताहरूले क्लमेफिन्ट सिटरेटलाई उनीहरूको अन्तिम उपचार पश्चात एक र तीन महिनाको बीच परिसंचरणमा रहन चाहानुहुन्छ। यो ध्यान दिइन्छ कि क्लोमेफिनि सेन्ट्रेट एकाधिक isomers: clomiphene (~ 62%) र zuclomiphene (~ 38%) समावेश छ।
क्लोमेफिन रासायनिक यौगिकको उन्मूलन आधा-अर्काको जीवन कम्तीमा चार घण्टामा गणना गरिन्छ, जबकि zuclomiphene रासायनिक यौगिक को एकदम लामो छ। क्लमफिन अवधारणामा तर एक हप्तामा सफा गरिएको छ, जबकि क्लोमोइको उन्मूलनको विस्तारित अवधिको लागि zuclomiphene घटक उत्तरदायी छ। Zuclomiphene प्लाज्मा भित्र राम्रो देखिन्छ एकपटक क्लोमेफिनि सिटरेट समापनको एक महिना र ट्रेस मात्रामा अक्सिजन हप्ता हप्तामा अशुद्ध उत्तेजनामा ​​रिपोर्ट गरिन्छ।
यद्यपि क्लमेफीन प्रयोगकर्ताको अन्तिम खुट्टा एक चोटि चार देखि ग्यारह हप्ताको मतलबको लागि परिसंचरणमा रहेको छ भने सबै प्रयोगकर्ताहरूले पनि त्यस्तो गतिमा औषधि हटाउन सक्दैनन्। केही प्रयोगकर्ताहरूले औसत (औसत छ तर हप्तामा) भन्दा छिटो एन्कोमोफिन र zuclomiphene isomers हटाउन सक्छ, जबकि अन्य छ हप्ताहरूमा एक पल्ट प्लाज्मा परिसंचरणमा अन्य zuclomiphene अझै पनि हुनुपर्छ। क्लोमेफिनको उन्मूलन गतिमा अन्तर-व्यक्तिगत विविधता चरको द्वारा व्याख्या गर्न सकिन्छ जस्तै व्यक्तिगत कारक, खुट्टा, र प्रशासन को अवधि।
दुई महिलाहरु, एकै समयमा हुन सक्छ, 50 मिलीग्राम Clomiphene आफ्नो म्यानुअल बिल्ली चक्र मा चाँडै पाँच दिन को लागी। यद्यपि, एक प्रयोगकर्ताले अन्य भन्दा छिटो दबाइ रोक्न सक्छ। यो सबै व्यक्तिको शरीरको शक्तिमा निर्भर गर्दछ। केही प्रयोगकर्ताहरूका लागि, औषधि लामो समयसम्म सक्रिय रहन सक्छ जबकि अन्य, दबाउ एक छोटो अवधि भित्र निष्क्रिय हुनेछ।
जेनेटिक्स: मेडिकल साहित्यले बताउँछ कि क्लमोफिनले गहन आन्तरिक चयापचय चयापचय गर्दछ। यद्यपि सटीक आन्तरिक अंग मार्गहरू यसको चयापचयको लागि उत्तरदायी हुन नसकिने छैन, एक च्यानलले गम्भीर भूमिका निभाएको विश्वास गर्दछ CYP2D6 (साइटोक्र्रोम P450 2D6)।
ड्रग्स को अधिकांश यदि उनको सबै सकारात्मक र उनको downsides छैन मा निर्भर गर्दछ कि तपाईं कसरि यो प्रयोग गर्दछ। उदाहरणका लागि, यदि दुर्व्यवहार वा यदि अति नै भयो भने, क्लोदोडहरूले साइड इफेक्टहरूको विकासको खतरामा राख्न सक्छन्। तथापि, त्यहाँ केही छन् क्लोमेड साइड इफेक्ट जुन सामान्य छन् र छोटो समयमा हराउन सक्छ। अर्कोतर्फ, तपाईं उन्नत साइड इफेक्ट्स अनुभव गर्न सक्नुहुन्छ ताकि तपाईले तपाइँको डाक्टर द्वारा निर्धारित भन्दा बढी खुराकहरू लिनु हुन्छ। Clomid प्रयोगकर्ताहरूमा सामान्य साइड इफेक्टहरू समावेश छन्;
स्तन छाती, दुखाइ, र असुविधा
योनि र uterine रक्तचाप
ओभेरियन हाइपस्टिम्युलेशन सिंड्रोम
तथापि, त्यहाँ गम्भीर साइड इफेक्टहरू छन्, तर उनीहरूले मात्र औषधी लिन कसरी निर्भर गर्दछ। यसको विपरीत, मानव शरीर प्रणाली पनि क्लमोड लिन पछि तपाईंले कस्तो अनुभवको एक महत्वपूर्ण निर्णायक हो। केही व्यक्तिहरूले गम्भीर साइड इफेक्टहरूको अनुभव गर्नेछन् भने उनीहरूले निर्धारित वा कम खुराक लिन्छन् भने। यसकारण हामी सधैं हाम्रा ग्राहकहरूलाई सल्लाह दिन्छौं कि उनीहरूले यो औषधि लिन सुरु गर्नुअघि मेडिकल परीक्षा गुमाउनु पर्छ। यदि तपाइँ यी कुनै प्रभावहरू अनुभव गर्नुहुन्छ भने, तपाईंले तत्काल चिकित्सा ध्यान खोज्नुपर्छ;
तपाईले पनि ध्यान दिनुहोस् कि यदि चीजहरू गलत छ भने, क्लोदोडले धेरै गर्भावस्थाको नेतृत्व गर्न सक्छ। यो उत्पाद प्रयोग गर्दा गर्भवती प्राप्त गर्न सक्ने एक उच्च मौका हो, यसका बारेमा 7% जुन तपाइँ जुत्ताहरू र 0.5% मौका पाउँनुहुनेछ जुन तपाईंले ट्रिपल वा उच्च अर्डर प्राप्त गर्नुहुनेछ। यो बुद्धिमानी हो कि तपाइँ पहिले आफ्नो चिकित्सक संग कुरा गर्छन, जोखिम को बारे मा छलफल गर्नुहोस, र यदि तपाईं जुडवां या गुणहरु लाई फिट गर्न को लागी निर्धारित गर्छन। यदि तपाईं गर्भवती प्राप्त गर्न तैयार हुनुहुन्न भने, यो नजिकको निगरानीबाट गुजारा बुद्धिमानी हो।
क्लोमेड प्रयोग गर्नु अघि, यो सुनिश्चित गर्नुहोस् कि तपाइँ यसको कुनै सामग्रीमा एलर्जी वा सम्भावनात्मक हुनुहुन्न। तपाईं आफ्नो चिकित्सकलाई पहिला कुरा गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईलाई प्रयोग गर्न उपयुक्त भएमा विशेषज्ञलाई सल्लाह दिनुहोस्। यस तरिकाले, तपाईं आफैले यी दुबै प्रभावहरू प्राप्त गर्न को लागी जोखिममा राख्नदेखि जोगिन सक्नु हुन्छ। साथै, सुनिश्चित गर्नुहोस् कि तपाइँ अनुशंसित खुराक पछ्याउनुहुन्छ।
महिलाहरु को लागि यस उत्पादन को सही ढंग देखि प्रयोग र यसको लागि अतिसंवेदनशील छैन, आशा गर्न को लागि धेरै संभावित लाभहरू छन्। तपाईंको क्लोमेड खुराक समाप्त गर्नको लागि तपाइँलाई अधिक भन्दा मजा लिनको लागि तपाइँले पहिले, डाई, र पछि तपाइँको डाक्टर समावेश गर्नुहोला Clomid फायदाहरू. क्लोमेडले निम्न प्रकारका प्रयोगकर्ताहरूको लागि विभिन्न फाईनहरू प्रदान गर्दछ;
यो लागत प्रभावी छ - यो बांझपन को उपचार को सबै किफायती तरिकाहरुमा छ। आईएफएफ जस्ता अन्य उपायहरूको तुलनामा क्लोमोडको लागत अपरिहार्य छ। यो व्यक्तिका लागि जीवन-सेवरको रूपमा आएको छ जुन बेरोजगारी समस्याहरु संग काम गरिरहेको छ तर धन को कमी को कारण उपचार को कमी छ। परिणामहरू जुन प्रयोगकर्ताहरू बाट प्राप्त हुन्छन् पैसा खर्चको मूल्य भन्दा बढी हुन्छ।
यो एक मौखिक औषधि हो - मौखिक औषधि अत्यन्त सजिलो छ र कम से कम दुखाइमा आउँछ। यो इंजेक्शनको विपरीत छ जहाँ प्रयोगकर्ताहरूले आफ्नो शरीरमा सुई राख्नु पर्छ, जुन सुपर आक्रामक हुन सक्छ। क्लोमेड केहि कमजोरी उपचार मध्ये एक छ जसले महिलाहरु लाई यस्तो समस्याहरु लाई बचाए।
प्राथमिक हेरचाहकर्ताले यो वर्णन गर्न सक्छ - सुसमाचार यो हो कि तपाइँ एक प्रजनन विशेषज्ञ भेट्न क्लिनो पर्सन प्राप्त गर्न छैन। यसले सुविधा बढाउँछ, विशेषगरि यदि तपाईं नजिकैको कुनै प्रजनन विशेषज्ञको बारेमा थाहा छैन। यो एक समय सेभर हो, र उत्तम भाग भनेको तपाईंले प्रदान गरिएको अनुशंसित दिशा पछ्याउनु भएको उपलब्ध प्रयोगको लागि सुरक्षित छ।
केहि साइड इफेक्ट्स संग आउछ - यदि सही तरिकाले प्रयोग गरिएमा, क्लोमोडसँग केहि साइड इफेक्टहरू छन्। यदि तपाईं कुनै पनि प्राप्त गर्नुहुन्छ भने, तिनीहरू केवल हल्का व्यक्ति हुन् जुन प्रयोग रोक्न वा तपाईंको शरीरलाई प्रभावमा प्रयोग गरिसकेपछि केही छोटो दूरीमा जान्छ। साथै, सम्झौता निर्माता वा सप्लायरबाट औषधि खरिद गर्न सम्झनुहोस् कि तपाइँलाई राम्रो क्लोमेड परिणामको लागि गुणस्तर उत्पादन पाउनुहुनेछ.
यस उत्पादनले धेरै सकारात्मक समीक्षाहरू र मूल्याङ्कनहरू प्राप्त गरेका छन् जुन यसले पहिले प्रयोग गरेको छ। धेरै प्रयोग गर्नेहरूले यसो भने कि ती छिटो अनुभव गरे Clomid परिणामहरू, र तिनीहरूले कसरी उनीहरूको शरीरमा प्रतिक्रिया देखाएको छक्क परे। अधिकांश महिलाहरु ले भन्यो कि उनि आफ्नो अवधि को सम्झना भइ रहेको छ जबकि अन्य अनियमित चक्रहरु पा रहे थिए र गर्भवती नहीं पाईयो, तर यो यस शानदार दबाइ को बारे मा थाहा छैन जब सम्म। साथै, तिनीहरूमध्ये धेरैले प्रयोग पछि तीन महिना भित्र परिणाम पाएका छन्।
तीमध्ये केहीले सिरियाच, नली, दस्त, र उल्टीको गुनासो गरे तर धेरैले वास्तवमा स्वीकार गरे कि उनीहरूले औषधीमा उछिन्थिन् र साइड इफेक्टहरू प्रयोग गरे पछि सही रोक दिए। अर्कोतर्फ, क्लोमोडसँग खराब अनुभवको उजुरी गर्ने अधिकांश प्रयोगकर्ताहरूले स्वीकार गरेका छन् कि उनीहरुले बिना औषधि प्रयोग नगरी औषधि प्रयोग गरे। विभिन्न औषधिहरूबाट मिश्रित प्रतिक्रिया र समीक्षा प्राप्त गर्न औषधि उत्पादको लागि यो सामान्य छ। सामान्यतया, महिलाहरु मा बांझपन मामलाहरु को उपचार को लागि क्लमोड एक उत्कृष्ट दबाइ हो। राम्रो भाग यो मौलिक ड्रग हो किनभने नियमित रूपमा इंजेक्शनहरू गुमाउनु हुँदैन। तपाईंले छोटो अवधि भित्र परिणामहरू पनि अनुभव गर्नुभएन पनि केही प्रयोगकर्ताहरूले केवल खुराकका तीन महिना पछि गर्भवती पाउने रिपोर्ट गर्दछन्।
शरीर निर्माणको लागि टेस्टोस्टेरोन डिकोनोटको अन्तिम गाइड(नयाँ ब्राउजर ट्याबमा खोल्छ)
Clomid बिक्री को लागि
अब त्यो कि तपाईंको चिकित्सकले तपाईंको डाक्टरलाई हस्तान्तरण गरेको छ, यो उत्साहित र प्रयास गर्न अभिवृद्धि गर्न सामान्य हो। यसले तपाईलाई पहिलो बिक्रेताबाट किन्न सक्छ कि तपाइँको मार्गमा ल्याउन सक्छ, र यो एक ठूलो गल्ती हो। यदि तपाईं Clomid किन्नु भएको छ भने, तपाईं सावधान हुनैपर्छ कि तपाईंले एक विश्वसनीयबाट प्राप्त गर्नु भएको हो Clomid आपूर्तिकर्ता र त्यो तपाईं स्कैमरहरूको जालमा पर्दैन। यस उत्पादनको लागि एक वृद्धि गरिएको मांग भएको छ, जसले अपरेन्टिनेटरहरूको संख्या बढेको र यसलाई बेच्ने दावी गरेको छ। यदि तपाईं पर्याप्त सावधान हुनुहुन्न भने, तपाईं केहि पैसा खर्च गर्न सक्नुहुनेछ जुन केहि खोज्न सक्नुहुनेछ जुन तपाईंले खोज्नु भएको छैन। साथै, तपाईं हुन सक्छ क्लोमेड पाउडर किन्नुहोस् त्यो खपतको लागि सुरक्षित छैन, जुन तपाईले पहिले नै सम्बोधन गर्नु भन्दा बढी खराब प्रतिकूल प्रभावहरू र दुखाइ ल्याउनुहुनेछ।
आफ्नो समय लिनुहोस् र क्लाइमड आपूर्तिकर्ता को लागी हेर्नुहोस् कि तपाई भरोसा गर्न सक्नुहुनेछ। क्लूमिड अनलाइन किन्नुले तपाइँलाई एक्सपोजर दिन्छ जसले तपाईलाई सही एक प्राप्त गर्न आवश्यक छ। अनलाइन समीक्षाहरू जाँच्नुहोस् र हेर्नुहोस् कि कुन विशेष व्यक्तिले उत्पादहरू खरिद गरेका अन्य व्यक्तिहरूले उत्पादको बारेमा भनिरहेको छ। तपाईं एक मित्र वा रिश्तेदारबाट सिफारिसहरूको लागि जुन तपाईले थाहा पाउनु भएको छ यो उत्पाद प्रयोग गर्नु अघि र तिनीहरूलाई तपाईंलाई आफ्नो मनपर्ने आपूर्तिकर्तालाई पठाउन अनुमति दिन सक्नुहुन्छ। हेर्दै गर्दा लागत एक निर्धारिती पनि हो Clomid बिक्री को लागि जब सम्म तपाईंको बीमा योजना लागत को कवर गर्दछ। तपाईंले आफैलाई अतिभारित गर्न अनुमति दिनुभएन, तर यसको सट्टा, केही अनुसन्धान गर, औसत बजार मूल्य बुझ्न र बिक्रिको लागि सबैभन्दा उचित मूल्यको साथ जानुहोस्।
औषधि एक संवेदनशील मुद्दा हो, र तपाईंले यसलाई अत्यन्तै गम्भीरतापूर्वक व्यवहार गर्नुपर्छ। पहिलो पदोन्नतिमा नआउनुहोस् जुन तपाईंको बाटो आउछ तर सट्टा, गुणस्तरको खोजी गर्नुहोस्। सुसमाचार यो हो कि हामी हाल क्षेत्र मा सर्वश्रेष्ठ क्लाइमड आपूर्तिकर्ता हो। तपाईं आफ्नो स्मार्टफोन मार्फत सजिलै आफ्नो अर्डर गर्न सक्नुहुन्छ, र हामी यसलाई तपाइँको ढोकामा डेलिभर गर्नेछौं। हाम्रो मूल्यहरू पनि धेरै व्यावहारिक छन्, र तपाईं सक्नुहुन्छ Clomid मा थोक मा खरीद हाम्रो प्रयोगकर्ता-अनुकूल वेबसाइटबाट। हामीलाई कुनै पनि समयमा कल गर्नुहोस् तपाईसँग प्रश्नहरू वा तपाईंको अर्डर गर्न सहयोग चाहिन्छ। हाम्रो कल लाइनहरू खुला 24 /7छन्।
महिलाहरु मा बांझपन को उपचार गर्न क्लूम - (सारांश)
क्लोमेडले महिलाहरूमा प्रजनन क्षमताको उपचारको लागी असाधारण प्रभावकारी साबित भएको छ। यसले शरीर बनाएर काम गर्दछ कि प्रयोगकर्ताको एस्ट्रोजेन स्तरहरू वास्तवमा भन्दा कम छन् भन्दा कम छन्, जुन पिट्युटरी ग्रंथिले क्यान्सरको स्तर हार्मोन उत्तेजित गर्दछ। यसले ओल्म वा ओवा उत्पादन गर्न ओभरीलाई उत्तेजित गर्दछ, र प्रयोगकर्ताले ओविलेशनको समयमा गर्भवती हुन सक्छ। यो एक सरल सिद्धान्त हो, र ड्रगले धेरै व्यक्तिहरूको लागि काम गरेको छ जसले आफ्नो समय दायाँ क्लोमोइड (50-41-9) र यसलाई प्रयोग गरे जस्तै यो। यदि तपाइँ कुनै पनि प्रजनन सम्बन्धी समस्याहरूको अनुभव गर्दै हुनुहुन्छ भने, यस उत्पादनमा लगानी गर्ने प्रयास गर्नुहोस् र परिणामहरूको आनन्द लिनुहोस्।
तथापि, सुनिश्चित गर्नुहोस् कि तपाइँले तपाइँको डाक्टरले अधिकतम खुराक प्रक्रियामा अधिकतम नतिजामा समावेश गर्दछ। यदि तपाइँ कुनै पनि उन्नत साइड इफेक्ट अनुभव गर्नुहुन्छ वा यदि तपाइँ कुनै पनि ड्रगको घटकमा एलर्जी हुनुहुन्छ भने तपाईंको दबाइलाई सूचित गर्न संकोच नगर्नुहोस्। समान रूपमा, तपाईको भौतिकलाई फोन गर्नुहोस् यदि तपाईले खराब साइड प्रभावहरू अनुभव गर्नु अघि स्थिति खराब हुन्छ।
जोम, एई, तेबर, एच जे, रनासिना, एस, जुन्गास, एस, र बोयलले, जे (एक्सएनएक्सएक्स)। पोलिकोस्टिक अंडा सिंड्रोम संग महिलाहरु मा बांझपन र प्रजनन उपचार को उपयोग को एक ठूलो समुदाय आधारित कोहोर्ट अध्ययन को डेटा। महिला स्वास्थ्यको जर्नल, 24(4), 299-307।
बerger, मेगाहर्ट्ज, मेसेज, एम।, पास्तासजाक, एभी, र रामसासी, आर। (एक्सएनएनएक्सएक्स)। पुरुष र महिलाहरु मा बांझपन र यौन रोग को बीच संस्था। यौन औषधि समीक्षाहरू, 4(4), 353-365।
10 सबैभन्दा लोकप्रिय एनाबोलिक स्टेरोइड कच्चा पाउडर 2019 मा